Health&education, palpa tansen, Tansen (2022)
Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Health&education, Public & Government Service, palpa tansen, Tansen.
मान्छे एउटै हुदैन सबैको ब्यबहार जान्न मन थियो ।
धनको आडमा टासिएका लाई आफुतिर तान्न मन थियो ।
गरिब भनि हेला गर्नेलाइ मुखले के जबाफ दिनु र खै।
अलिकति धन कमाउन पाए पैसाले हान्न मन थियो ।
एउटा बृद्रा आमा अनि उहाको एक कुपुत्र छोराको जिबन कथा पोस्ट गरेको छु,मन पर्छ,भने लाईक अनि शेर गर्न अनरोध गर्दछु
एउटी बुढी थिइन् । उनको एउटा छोरो थियो ।
उसलाई DV परेर अमेरिका गएको थियो । एकदिन
छोराले फोन गरेर भन्यो:"आमा म नेपाल आउँदैछु ।"
छोराको कुराले आमा असाध्यै खुशी भइन् ।
छोरो आउने दिन गन्न थालिन् । एकदिन
छोरो आयो । आमा खुशी भइन् ।
केहि दिनपछि छोराले भन्यो:"आमा अब
यो नेपालको सबै सम्पत्ती बेचेर
हामी अमेरिका जानुपर्छ ।" आमालाई
आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ती बेच्ने मन त थिएन तर
आफ्नो मुटुको टुक्रा छोरा नै अमेरिका भए
पछि छोरैसँग उतै जान्छु भन्ने बिचारले बेच्ने
मञ्जुरी दिइन् । सबै सम्पत्ती बेचेपछि छोराले
भन्यो: आमा आज हामी अमेरिका जानुपर्छ ।
छोराले आमालाई एयरपोर्ट लिएर गयो ।
एयरपोर्टमा गएर प्रतिक्षालयमा बसाउँदै भन्यो:
आमा तपाई एकैछिन बस्दै गर्नु म टिकट लिएर आउँछु
। यति भनेर छोरो भित्र गयो ।
आधा घण्टा भयो छोरो आएन । 2
घन्टा बित्यो5घन्टा बित्यो छोरो आएन । अझै
छोरो आउने आशमा बसिरहिन् । रातको 12
बजिसक्यो तैपनी छोरो आएन । एउटा एयरपोर्ट
कर्मचारी आएर भन्यो: आमा तपाई धेरै बेर
देखि यहि बसेको देखेको छु । किन बस्नु
भाको कोही बिदेशबाट आउँदैछ र ? बुढी: होइन
मेरो छोरो अमेरिका जानको लागि टिकट
काट्न गाछ । उसैलाई कुरेर बसेको । कर्मचारी:
अमेरिका? अमेरिका जाने प्लेन त3बजे नै
गइसक्यो । तपाईको छोराको नाम के हो ?
बुढीले छोराको नाम भनेपछि कर्मचारीले
अमेरिका जाने लिष्टमा चेक गरेर भन्यो:
आमा तपाइको छोरो त3बजेको प्लेनमा गइसक्नु
भएछ । कर्मचारीको कुरा सुन्ने बित्तिकै
बुढी केही बोल्न सकिनन् । आँखाबाट आँशु मात्र
खसिरह्यो । एकोहोरी भइन् । उनी त्यहाँबाट
हिडिन् । घर जाउँ घर छैन अब बाँचेर के गर्नु भनेर
नदिमा हाम्फालेर आत्महत्या गरिन् । केहि समय
पछि हल्ला सुनियो त्यो बुढीको छोरो पनि अमेरिका ठूलो दुर्घटना परि मर्यो रे
। शिक्षा: आमालाई भन्दा ठूलो सम्पत्तीलाई
ठान्नु हुन्न । जसले आमालाई धोका दिन्छ उसले
यही जुनी मै सजायँ पाउँछ । मेरो आमा नै
मेरो भगवान हुन !!
दिपेश द्रपण महतारा
यस्तो छ सिन्धुपाल्चोक माङ्गाको पहिरो पीडा (भिडियो)
Confiraadica da Doutora Liliane de um suco que tem efeito desintoxicanteediurético, que ajudaalimpar o organismo.
1 fatia grande de melancia
Algumas folhas de salsinha
1 talo de salsão com as folhas
1 talo de erva-doce (ou funcho)
1 cenoura pequena (lavadaedescascada)
Bata todos os ingredientes no liquidificadoreadoce com mel. Rende aproximadamente dois copos grandes. Beba preferencialmente sem coar.
Calorias: 60 calorias por copo
ढाड दुख्ने समस्या !!!
(जानकारी शेयर गर्ने गर्नुहोला ता की तपाइको फेसबुक हेर्नेले पनि केही ज्ञान पाओस...तपाईलाई काम नलागे पनि तपाइको साथीलाई/आफन्तलाई कामलाग्न सक्छ )
तपाईलाई यदि ढाड दुख्ने समस्या छ भने नआत्निुहोस् । तपाई एक्लै हुनुहुन्न किनकी यो समस्या प्रायः सबै मान्छेले आफ्नो जीवनको कुनै कालखण्डमा एक न एक पटक महसुस गरेकै हुन्छ । लगभग संसारका ८५ प्रतिशत मान्छेहरुले यो समस्या सानो वा ठूलो रुपमा भोगेकै छन् । थुप्रै मानिसहरु सकेसम्म घरायसी प्रविधिको प्रयोग गरेर नै यसबाट मुक्त हुन्छन् भने कतिपयलाई डाक्टरको सल्लाह जरुरी पर्छ । धेरै मानिसहरुले ढाड दुख्ने समस्याकै कारण आफ्नो दैनिक घरायसी र अफिसको काम गर्न सकिरहेका हुदैनन् । त्यसकारण मैले यस पटक यो समस्याको कारण खतराको संकेतहरु रोकथामका उपाय र सामान्य उपचार सम्बन्धीका विषयलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु ।
के कति कारणले ढाड दुख्न सक्छ
ढाड दुख्ने कारणहरु त धेरै नै छन् तर ति सबै कारणहरुले शरिरमा पर्ने असर भनेको त्यहाँ रहेको मांसपेशी तन्तु वा हाडमा पर्ने असरनै हो भन्दा फरक नपर्ला । केही कारणहरु यसप्रकार छन् -
१ गलत तरिकाले चिजबिजहरु उचाल्नु
२ एक्कासी गरीने कडा व्यायाम
३ अप्ठ्यारो सिरानी र सुत्दाको पोजिसन
४ आकस्मिक दुर्घटनाहरु जस्तैः उचाईबाट खस्नु खेलकुदमा हुने दुर्घटना सवारी दुर्घटना आदी
५ उभिँदा वा बस्दाको अप्ठ्यारो पोजिसन
६ कडा सोल भएको र अग्लो हिल भएको जुत्ता लगाएर लामो समयसम्म उभिँदा
७ लामो समयसम्म कुप्री परिरहनु
८ धेरै गह्रौं वस्तुहरु उचाल्नु
९ गर्भवती अवस्था
१० विभिन्न रोगव्याधि र उमेरले ल्याउने शारिरीक परिवर्तन आदि ।
यि र यस्तै कारणहरुले मांसपेशी र तन्तु बढी तन्कियो वा हाडमा असर पर्न गयो भने ढाड दुख्न सक्छ ।
कुन अवस्थामा डाक्टरको सल्लाह आवश्यक हुन्छ
घरमै सामान्य उपचार प्रविधि अपनाई आराम गर्ने वा डाक्टरकहाँ पुग्ने भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ । ढाड दुखेको बेला तल उल्लेखित समस्याहरु भएमा तुरुन्त चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्दछ -
१ ज्वरो आएमा
२ धेरै टाउको दुखेमा
३ ६० वर्ष उमेर नाघेका र लामो समयसम्म ‘स्टेरोईड’ औषधी सेवन गरिरहेको भएमा
४ खुट्टाहरु कमजोर भएजस्तो महसुस भएमा
५ निद्रा नलागेमा
६ गर्भवती अवस्थामा
७ दिसा वा पिसाब आफै हुन थालेमा
८ घरायसी उपचारले ७२ घण्टा बितिसक्दा पनि राम्रो नगरेमा
घरायसी उपचारको प्रथम कडि भनेको आराम गर्नु हो तर यसको अर्थ सुतिराख्नु भन्ने होइन किनकि त्यसले अझ हानि गर्न सक्छ । बरु हल्का घरायसी काममा आफूलाई तल्लिन राख्नु हितकर हुन्छ । शुरुमा ‘आइस’ लाई एउटा प्लाष्टिकको झोलामा राखी त्यसलाई एउटा पातलो कपडामा बेरेर लगभग २० मिनेट सेक्नुपर्छ । त्यसपछि करिब ४८ घण्टामा तातोले सेक्नुपर्दछ । यसको लागि ‘हट ब्याग’ वा हिटरको प्रयाग गर्न सकिन्छ । ढाड बाँध्ने बेल्टको प्रयोगले ढाड तातो राख्नुकोसाथै दुखाई कम गर्ने र आरामको अनुभव दिन्छ । यतिले पनि भएन भने दुखाई कम गर्ने औषधीहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
रोकथामका उपायहरु -
१ सामान्य व्यायाम – शरिर तन्काउने हिँड्ने आिद
२ क्याल्सियम र भिटामिन ‘डी’ युक्त पोषण
३ पानिको प्रशस्त सेवन किनकी मेरुदण्डको हाडको बिचमा हुने ‘डिस्क’ मा ७० प्रतिशत पानी हुन्छ
४ धेरै कमलो बिछ्यौनामा नसुत्ने
५ ढाडलाई सधैँ सिधा राख्ने प्रयास गर्ने
ज्ञान बाँड्नु सबैभन्दा ठूलो धर्म हो त्यसैले सबैले लाइक तथा शेयर गर्न नभुल्नुहोला !!============एक शेयर गर्न नबिर्सनूहोला"
Photos from Health&education's post
मुटुका रोगहरु ( अत्यन्त महत्वपूर्ण जानकारी )
सम्पूण् मुटुका रोगहरुको ७५ प्रतिशत हृदयाघातसँग सम्बन्धित मुटुरोगको ९० प्रतिशत कारण अव्यवस्थित जीवनशैली हो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ
हिजोआज धेरै व्यक्तिहरुमा मुटुसँग सम्बन्धित समस्या देखिन्छ । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदयघात, कोलेस्टेरोल, युरिक एसिड आदिको समस्या निकै बढेको देखिन्छ । मुटुका धेरैजसो रोगहरु जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छन् । आजकल जीवनशैली व्यवस्थित छैन । अव्यवस्थित जीवनशैलीको नतिजा हो मुटुको रोग । आधुनिक सभ्यता, व्यस्त जीवन, महत्वकांक्षा, भोजभतेर, कम्प्युटर, टेलिभिजन, अत्यधिक मानसिक तनाव, व्यायामको कमी, पैसा कमाउने दौड यी नै हुन् संक्षिप्तमा मुटु रोग बढ्नुका प्रमुख कारणहरु ।
यसकारण जीनवशैलीलाई व्यवस्थित गर्न सकेको अवस्थामा धेरै हदसम्म मुटु रोग रोक्न सकिन्छ । मुटुरोग नियन्त्रणका लागि जीवनशैली व्यवस्थित गर्नेतर्फलाग्न जरुरी छ ।
सुत्ने, उठ्ने, खाने, पिउने, बानीव्यवहार, सोचाई, दिनचर्या आदि सबै जीवनशैलीभित्र पर्दछन् । सम्झन सजिलो होस् भनी जीवनशैलीलाई आहार, विहार र विचार गरी तीनवटा पक्षमा विभाजित गरेर हेन सकिन्छ । मानिसको आहार, विहार र विचारको स्वरुप नै जीवन शैली हो । यो कस्तो हुनुपर्दछ भन्नेबारे तल वर्ण्र्ाागरिएको छ ।
आहार (भोजन) कस्तो हुनुपर्दछ –
१. घ्यू-तेल तथा अन्य चिल्लोको मात्रा जतिसक्यो कम प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । खाना पकाउन शुद्ध तोरीको तेल नै सबैभन्दा उत्तम हुन्छ ।
२. नून दैनिक ३ देखि ५ ग्रामभन्दा बढी प्रयोग गर्नुहुँदैन । नून थपेर खाने बानी छोड्नुपर्छ ।
३. बिहान-बेलुकीको खानामा हरियो साग हुनु अत्यन्त लाभदायी हुन्छ । दैनिक कम्तिमा एकपटक फलफूल खानुपर्छ ।
४. बेलुकीको खानामा २-३ वटा सुख्खा गहुँको रोटी, साग र मौसमी तरकारी हुनुपर्छ । बेलुकीको खाना ८.०० बजेभित्र खाइसक्नुपर्छ । बिहान एक छाक मात्र भात खाने गर्नुपर्छ । खानाको मात्रा सबैको लागि एकैनास हुँदैन । धेरै शारीरिक श्रम गर्नेले धेरै खानुपर्छ, थोरै गर्नेले थोरै खाने गर्नुपर्छ । काम कम माम धेरै गर्नुहुँदैन । बेलुकीको खाना खाएपछि तुरुन्त सुत्नुहुँदैन, कम्तीमा दुइ घण्टापछि मात्र सुत्नुपर्छ ।
५.शाकाहारी हुनु मुटुका लागि फाइदाजनक छ । तर नियन्त्रित रुपमा माछा, मासु खाएमा हानी छैन । खसी, राँगो, बँगुरले कोलेस्टेरोल धेरै बढाउँछ । माछा र कुखुराले कम बढाउँछ । चिल्लो नराखी माछा र कुखुरा पकाउने तरिका सिक्नुपर्छ । यस्तो खानाले हानी गर्दैन । माछामासु बिहान र दिउँसोको खानामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । बेलुकी माछामासु नखानु नै उत्तम हुन्छ ।
६. उच्च फाइवरयुक्त खानाले मुटुलाई फाइदा गर्छ । खानामा फाइवरको प्रमुख स्रोत गहुँ, गेडागुडी, हरियो सागपातहरु हुन् । गेडागुडीलाई अंकुरित रुपमा खानु अझ बढी फाइदाजनक हुन्छ ।
७. खाना थोरै थोरै तर धेरैपल्ट खानु उचित हुन्छ । दुइ छाक खाने तर पेट कसेर खाने, खाने बित्तिकै सुत्ने, यो मुटुका लागि अत्यन्तै खतरनाक हो । आहार व्यवस्थापन भन्नाले यस्तो बानी त्यागी थोरै खाने, धेरै पल्ट खाने र उचित खाना खाने बानी बसाल्नु हो ।
८. मुटु रोग लागिसकेकाहरुले चिकित्सकको सिफारिस अनुसार रोग अनुसारको आहार लिनुपर्छ ।
९. मोटो मानिसले तौल घटाउनुपर्छ र यसका लागि कम क्यालोरीयुक्त आहार लिनुपर्छ ।
विहार (व्यवहार) कस्तो हुनुपदर्छ –
१. व्यवस्थित सुत्ने र उठ्ने बानी एकदम महत्वपूण् छ । राती १० देखि ११ बजेभित्र सुत्नुपर्छ । शरीरलाई दैनिक ५ देखि ७ घण्टासम्मको गहिरो न्रि्रा अत्यावश्यक छ । न्रि्रा लाग्दैन भने औषधी आएर भए पनि निदाउनुपर्छ । न्रि्रा नपरेमा मुटका रोगहरु बढ्दै जान्छन् । न्रि्रा कम पर्ने मानिस बढी मोटाउँछन् अनि बढी मोटो मानिस मुटुरोगी हुन्छन् । न्रि्रा कम हुँदा दिमागमा बोझ बढ्छ, रक्तचाप, ब्लडसुगर बढ्छ, हृदयाघात हुन्छ । यी प्रमाणित तथ्य हुन् ।
२. बिहान ५ देखि ६ बजेभित्र उठ्नुपर्छ । ढिलासम्म सुत्नुहुँदेन । बिहान जति सबेरै उठ्यो मन त्यति नै बढि स्वच्छ र शरीर चंगा हुन्छ ।
३. बिहान उठेर नित्यकर्म सकेपछि व्यायाम गर्नु अनिवार्य छ । उठेपछि नियमित एक घण्टा व्यायाम गर्ने बानी बसाल्नु अति आवश्यक छ । यसलाई सुत्ने, उठ्ने, खाने, पिउनेजस्तै नियमित नित्यकर्म नै बनाउनुपर्दछ । योगासन, प्राणायाम र ध्यान सबैभन्दा उत्तम शारीरिक र मानसिक व्यायाम पद्धति हुन् । दैनिक बिहान एक घण्टा योग गर्नु मुटुरोग नियन्त्रण तर्फो प्रभावकारी कदम हो । यसबाहेक अन्य व्यायाम पद्धति पनि अनुशरण गर्न सकिन्छ ।
४. व्यायाम सकेपछि ३० मिनेट त्यस दिन गर्नुपर्ने कार्यको योजना बनाउनुपर्छ । यसो गर्ने बानी बसालेमा कार्यहरु व्यवस्थित रुपमा हडबड नगरिकन र प्रभावकारी तवरले गर्न सकिन्छ ।
५. चुरोट, सुर्ती र रक्सी पिउने बानी मुटुका लागि हानिकारक छ । यो बानी त्याग्नुपर्छ ।
६. आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कार्यबोझ लिनुहुँदैन । नसक्ने भएपछि सक्दिन भन्न डराउनुहुँदैन । अत्यधिक कार्यबोझबाट नै उच्च रक्तचाप, हृदयाघातजस्ता रोगहरु उत्पन्न हुन्छन् । बाँच्ने आफ्नो लागि हो अरुका लागि होइन भन्ने मानसिकता बनाउनुपर्छ । हप्ताको एक दिन विश्राम आवश्यक छ । यो दिन परिवारका सदस्यहरुसँग बिताउनुपर्छ ।
७. आजको दिन, आजको काम, आजको व्यवहारलाई नै महत्व दिएर हेर्नुपर्छ, बितेको कुरा र भोलि हुने कुराहरुलाई लिएर आजको काममा बाधा उत्पन्न हुने परिस्थिति बनाउनु हँदैन ।
८. सानालाई माया र ठूलालाई आदर गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।
९. किताब पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ । किताबाट ज्ञान-बुद्धि मात्र होइन, सुख-सन्तुष्टि पनि प्राप्त हुन सक्छ । नियमिन रुपमा कुनै न कुनै किताब पढ्ने बानी भएका व्यक्तिहरुको जीवन बढी व्यवस्थित हुन्छ । फूर्सद हुँदा, कसैलाई कुदा किताब पल्टाइहाल्नुपर्छ । आफूलाई मनपर्ने र विश्वप्रसिद्ध पुस्तकह पढ्ने गर्नुपर्छ ।
१०. वर्षो एकपल्ट परिवारका सदस्यहरुका साथ कुनै नयाँ ठाउँमा घुम्न जाने बानी बसाल्नुपर्छ । सिनेमा हेर्ने, संगीत सुन्ने आदि पनि जीवनशैलीका आवश्यक पक्ष हुन् । संगीत बिनाको जीवन निरस हुन्छ । निरोगी रहन गीत-संगित नियमिन सुन्ने गर्नुपर्छ ।
११. आफ्नो लागि गरिने कुनै पनि क्रियाकलापले अरुलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भए त्यो रोक्नुपर्छ ।
विचार (सोचाई) कस्तो हुनुपर्दछ –
१. मानसिक तनाव उत्पन्न हुने कारणहरु धन-सम्पत्ति, अन्तरव्यक्ति सम्बन्ध, कार्यबोझ, लेनदेन, महत्वाकांक्षा, नामको भोक आदि मुख्य हुन् । यी पक्षहरुको वैचारिक व्यवस्थापन महत्वपूण् मुद्दा हो । विचारमा सकारात्मक चिन्तन प्रवल रहनुपर्छ । उज्यालो पक्ष, राम्रो पक्षलाई नै समाएर हिँड्न सिक्नुपर्छ । सुख, सन्तुष्टि भन्ने कुरा विचार र मनबाट आउने मनोगत कुरारु हुन् धन-सम्पत्ति र वस्तुबाट सुख प्राप्त हुँदैन ।
२. धन कमाउनुपर्छ तर थुपारेर राख्नुहँदैन । धन कमाउनेले त्यसको उपभोग गर्नुपर्छ । धन उद्योगमा लगाएर अरुका लागि रोजगारी प्रदान गर्नुपर्छ । प्रयोग नगरी थुपारेर राखेको धनले तनाव उत्पन्न गराउँछ ।
३. कुनै पनि समस्या छ भने त्यसको स्थायी समाधानतर्फलाग्नुपर्छ । समस्या जति लामो समयसम्म रहिरहन्छ त्यनि नै मनलाई पिरोलिरहन्छ ।
४. शत्रुता राख्नुहुँदैन । चित्त नबुझेको कुरा मनमा राख्नुहुँदैन । बाहिर ठाउँमा भन्नुपर्छ । यसबाट मनमा शान्त हुन्छ ।
५. महत्वाकांक्ष र नामको भोकले मानसिक तनाव जन्माउँछ । यसको पछाडि लाग्नुहँदैन ।
६. जीवनका विविध पक्षहरुलाई सरल र सहज रुपले ग्रहण गर्न सिक्नुपर्छ । सबै विचारकै कुरा हो । जस्तो सोच्यो त्यस्तै हुन्छ । पानी पर्दा रमाउन पनि सकिन्छ, दुःखी हुन पनि सकिन्छ । घरमा पाहुना आउँदा सुखी हुन पनि सकिन्छ, दुःखी हुन पनि सकिन्छ । यसैगरी घरमा चोरी हुँदा चिन्ताले मर्न पनि सकिन्छ, फेरि परिश्रम गरेर अझ बढी कमाउँला भनी चित्त बुझाउन पनि सकिन्छ ।
८. विचारलाई व्यवस्थित गर्न योग अभ्यास विशेषगरी प्राणायाम र ध्यान अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छन् ।
कसैले यो सानो कुकुर को आमा लाई मारिदिएछ । अनि यो सानो कुकुर आफ्नो आमा लाई छोड्न चाहादैंन ।बाबु आमाको खाँचो र माया उितकै महत्वपुर्ण हुन्छ एउटा बालकलाई चाहे त्यो जनावे होस चाहे मिनस अझ बालक हुनजेल सम्म सारा संसारनै बाबु आमा हुन भन्ने एतार्थ िचत्रीण गरेको छ यो हृदयिवदारक तस्िवरले।
क्राईष्ट लभ गर्न उक्साउँछन,
बुद्ध घर छोडेर हिँड्न उक्साउँछन,
शिवजी गाँजा तान्न उक्साउँछन
कुनदिन देउताहरुले मलाइ बिगारेर छोड्छन
यो तस्विर हो यमनको, यमनको हाई कोर्टले एक महिलालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा यो ब्याक्तिलाई उसको टाउकोमा गोलि हानि हत्या (सजाय) गर्न आदेश दिएको थियो, यदि नेपालमा पनि यस्तै सजाय हुने हो भने सायद बलात्कारको घटनामा कमि आउने थियो कि ....?? जनचेतनाको लागि सक्दो Share गरौ !!!
Be the first to know and let us send you an email when Health&education posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राव
Chilangdi :: चिलाङ्दी - Palpa
Mujhung PALPA /Rainadevi Chhahara-5
श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्या
Nisdi-4, Arunkhola, Palpa
Other Public & Government Services in Tansen
Family Planning Association Of Nepal, Palpa B
lumbini zone, palpa district nepal
हेलो,जिल्ला हुलाक कार्यालय ,पाल्पा ।
Palpa shreenagar Lumbini Nepal
We will notify you when anything happens in Tansen.